Posted by သက်ဝေ at 5:33 PM
myatnoe March 10, 2008 at 5:54 PM
yes, u right. I've an idea to write .Thanks for sharing.
Younggun March 11, 2008 at 9:49 AM
Your idea is like me.But I am justaguy standing at the door ever closed.It is my real life.I feel sadness when I read your this post.But it is ended by her sharp words.Thank you,anyway.
တန်ခူး March 11, 2008 at 2:27 PM
နှလုံးသားတံခါးဆိုတာ (များသောအားဖြင့်) တသက်မှာတကြိမ်သာ ချစ်သောသူလှမ်းလာဖို့ ဖွင့်ပေးတတ်ကြတာ သူမေ့နေခဲ့သလား သက်ဝေရယ်။
mothonlay March 12, 2008 at 1:33 PM
ဘယ်တော့မပွင့်ဟလာမည့် မဟုတ်သည့် ထိုတံခါးနောက်တွင် သူရပ်နေဆဲ ဆိုတာကို သိလိုက်ရသောအခါ သူ့ အတွက် အနည်းငယ်ဝမ်းနည်းသွားရုံမှ အပ ထူးထူးခြားခြား မခံစားရပါ။ ဤတံခါးသည်သူ့ အတွက် ဘယ်သောအခါမှ ပွင့်ဟလာမည်မဟုတ်ဆိုသည်ကို သူသိစေချင်လှပါသည်။
စောင့်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့လူက....အမှန်တကယ်လည်း ဖြူစင်တဲ့သံယောဇဉ်ရှိခဲသူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့.... အစ်မရယ်....
nu-san March 12, 2008 at 10:42 PM
နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေးကို ကြိုက်တယ် သက်ဝေရေ.. တံခါးပွင့်လာမလားလို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စောင့်နေသူကို သနားတယ်။ တဖက်က မဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုလည်း အပြစ်ဆိုလို့မှ မရတာနော်..... အင်း..ဖူးစာကံဆိုတာကြီးကိုပဲ အပြစ်ပုံရတော့မှာပဲ.. :P
စိုးထက် - Soe Htet ! March 16, 2008 at 5:57 AM
မှန်တယ် ဗျို့ ... အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ... :D
ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာတော့ ပို့ပေးလိုက်ပါ ...
သတ္တ၀ါတိုင်းကို ထားတဲ့ မေတ္တာမျိုး :D
သက်ဝေ March 29, 2008 at 11:03 AM
မြတ်နိုး တန်ခူး မနုစံ ကိုစိုးထက် အားပေးစကားတွေ နဲ့Comments တွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
Younggun... စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ ။ စစ်မှန်တဲ့ အချစ်အတွက် ရလာဒ်တစ်ခုခုတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရှိလာမှာပါ။
မုတ်သုန်လေ... အဲဒီဆုကို တောင်းပေးပြီးသားပါ။ မျှတတဲ့ အတွေးစိတ်ကူးလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ နော်။
Younggun နဲ့ မုတ်သုန်လေ... ရှင်တို့ အတွက် ပိုစ့်လေးတစ်ခု သပ်သပ်ရေးပေးမယ်
လို့့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
layma July 27, 2008 at 1:24 AM
အချစ်သည် အတ္တ တစ်ခုဖြစ်၏။
tg.nwai November 28, 2008 at 11:30 AM
သက်ဝေရေ.. တကယ်တမ်းကျတော့ တဖက်သတ်အချစ်ဆိုတာ ဘယ်သူပဲ ကြုံရကြုံရ စိတ်မကောင်းစရာပါ..။ တစ်ယောက်နဲ. တစ်ယောက်က ခင်မင်ရင်းစွဲရှိပြီးသားဆို ပိုဆိုးတာပေါ့..။ စာနာနားလည်တာက တခြား.. ဖန်တီးလုပ်ယူလို.မရတာက တခြား..။